Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga oo 80 Qof u Qeybisay Gawaarida Naafada - Halbeeg News
Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga oo 80 Qof u Qeybisay Gawaarida Naafada
Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga ayaa maanta safaaradda dowladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa gawaarida naafada ugu qeybisay 80 qofood oo naafo Soomaaliyeed.
Munaasabadda ka dhacday safaaradda Turkiga waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan Eng. Yariisow, safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan Beker, xubno ka socday hay’adda bisha cas Turkiga ee TIKA iyo mas’uuliyiin kale.
Ugu horreyn, Cabdulqaadir Atabek oo u hadlay hay’adda TIKA ayaa sheegay in 80 qof oo naafo ah ay u qeybin doonaan gawaarida loogu tala galay dadka curyaamiinta si ay bulshada wax ula qabsadaan loona fududeeyo socodka.
“Waxaan maanta halkan kuraasta loogu talagalay dadka naafada ah ugu qeybinaynaa 80 qofood walalaheen Soomaaliyeed ah, waxaan”
Masuulkan ayaa sheegay in hadii hal qof oo Soomaali ah ay wax u qabtaan ay la mid tahay iyagoo kaalmeeyey dhamaan dadka Soomaaliyeed.
“Waxaan aaminsanahay hadii aan hal qof oo walaalkeen ah aan caawino ay udhiganto inaan caawinnay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed”.
Atabek ayaa sidoo kale sheegay in todobaadkan gudahiisa ay ha’adda Tika ka bilaabi doonaan qalliin indho fiiqis ah magaalada Muqdisho.
“Sidoo kale isbuucan gudahiisa waxaan barnaamij indha fiiqid ah ka sameyn doonaa isbitaalka Rajib Dayid Erdogan”
Dadka naafada ah ee loo qeybiyey kuraasta ayaa sheegay in xilli wanaagsan ay kusoo begantay, maadaama magaalada ay roobab ka jiraan, dadka naafada ahna ay biyaha ku dhex guur guuran jireen waxayna u mahad celiyeen dowladda Turkiga iyo hay’adda TIKA.
Olgan Beker, safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo goob joog ka ahaa munaasabadda ayaa u mahad celiyey hay’adda bisha cas Turkiga ee TIKA .
“Waxaan jeclahay inaan hortiina ugu mahad celiyo hay’ad bisha cas ee Turkiga oo maanta halkan ka qeybin doonta kuraasta loogu tala galay dadka naafada ah”
Beker ayaa sidoo kale sheegay in walaalaha Turkiga ayaa sii kordhin doonaan kaalmada dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ay fiiro dheeri u yeelan donaan barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho inta lagu gudo jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ee soo socota.
“ Dadka barakacayaasha ee ku dhaqan Muqdisho waxaan u yeelan doonnaa fiiro gaar ah, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, waxaan sii kordhin doonnaa dadaaladeena iyo hawlaheen gargaarka ee aan ka wadnay Soomaaliya inta lagu jiro Ramadaan iyo Ramadaanka Kadibba ” ayuu yiri Beker.
Ugu dambeyn, guddoomiye C/raxmaan Yariisow oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa uga mahadceliyey dowladda Turkiga iyo hay’adda bisha case sida hagar la’aanta ah ee ay ugu soo gurmadeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ugu nugul bulshada Soomaaliyeed.
“Sidoo kale si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa bisha case ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaar ah iska saartay iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada” ayuu yiri Eng. Yariisow.
Dowladda Turkiga ayaa guda dalka ka fulisay gurmad iyo mashaariic hormarineed wixii ka dambeeyey sanadkii 2011.
Wasiiru Dowlihii Wasaaraddada Ganacsiga oo Is Casilay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay daahfurka tirakoobka shaqaalaha rayidka